Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha Baarlamaanka Kenya oo Gacan-Kahadal uu Dhexmaray, Ogaw Sababta.
Xubnaha Baarlamaanka Kenya oo Gacan-Kahadal uu Dhexmaray, Ogaw Sababta.
Posted by ONA Admin	/ December 23, 2016
Xil-Dhibaanada dalka Kenya ayaa mariyay isbaddelo lagu sameeyay sharciga doorashada Kenya, kaas oo u oggolaanaya guddiga doorashada inay aqoonsiga iyo tirinta codadka gacan loo adeegsado, haddii tiknoolajiyadda ay guul darreysato.
Markii hore sharciga ayaa oggolaanayay in qalab tiknoolajiyadeed oo kali ah loo adeegsado arrimahaasi. Ka hor inta aan la ansixin isbaddelada sharcigan, mucaaradka ayaa ka baxay aqalka baarlamaanka , iyagoo sheegay in mudanayaasha xisbiga talada haya ay adeegsadeen feer iyo hub si ay u hubiyaan in sharciyadan la ansixiyo.
Mucaaradka ayaa hadda aaday maxkmadda si ay isugu dayaan joojinta dhaqangelinta sharcigan cusub. Mucaaradku wuxuu ku doodayaa in gacan ku tirinta codadka ay horseedi karto in xisbiga talada haya uu ku shubto doorashada.
Dhinaca kale ciidammo hubeysan ayaa la dhigay dibadda hore ee baarlamaanka oo Arbacadii ay xildhibaanada dalka Kenya ay isugu gacan-qaadeen. Boqolaal qof ayaa ku dhimatay muran ka dhashay natiijadii doorashada madaxtinnimada Kenya ee sanaddii 2007.